Miyey Manchester United heshiis cusub ka saxiixan doontaa Juan Mata, mise Albaabka ayay u tilmaami doontaa? – Gool FM
(Manchester) 18 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inaysan Albaabka looga baxo Old Traffrod u tilmaami doonin ciyaaryahankeeda Juan Mata, isla markaana ay heshiis cusub ka saxiixan doonto.
Sida ay warinayso Jariiradda The Independent Juan Mata ayaa haatan qarka u saaran inuu heshiis cusub qalinka ugu duugo kooxdiisa Manchester United.
Qandaraaska uu xiddigan xulka qaranka Spain haatan kula jiro kooxda Man United ayaa dhammaad ku dhow, waxaana la arki karaa isagoo beeca xorta ah kaga tagaya garoonka Old Traffrod.
Laakiin kooxda Manchester United ayaa u dhaqaaqeysa sidii ay u sii haysan lahayd Mata, oo uu u sii joogi lahaa Magaalada Manchester.
Kubbad sameeyahan Mata ayey Man United u soo bandhigaysaa heshiis kordhin cusub oo aan la sheegin inta sanadood oo ay gaarsiisan tahay, mana loo malaynayo inuu diidi doono qandaraaskaas xiddiga xulka qaranka Spain.
Mata ayaana ka mid noqonaya xiddigo dhowr ah oo kooxda ugu guulaha badan England ay u soo bandhigtay heshiisyo cusub.
Juan Mata ayaana muddooyinkii dhowaa la hadal hayey inuu dib ugu laaban doono dalkiisa Spain, balse haatan waxaa la filan karaa inuu dhowaan heshiis cusub qalinka ugu duugo kooxdiisa Manchester United.